कोरोना भाइरसको घरमै साधारण उपचार कसरी गर्ने ? — onlinedabali.com
कोरोना भाइरसको घरमै साधारण उपचार कसरी गर्ने ?
डबली संवाददाता२०७७ भदौं ८ गते
काठमान्डौं । हाल बिशवभर महामारी भएर फैलिरहेको कोरोना भाइरसले बिश्वभरका लाखौ मानिसहरुको ज्यान लिई सकेको छ भने करोडौ मानिसहरु कोरोनाबाट सक्रमित भईसकेको छन् । यस अवस्थामा अस्पतालमा कोरोना सक्रमित दिनदिनै बढ्दै गईरहेको र नेपाल पनि अब अस्पतालहरुमा कोरोना सक्रमितले उपचार नपाउने स्थिति बन्दै गईरहेको छ ।
यहि समस्यलाई मध्यनजर गदै हामिले कोरोनालाई घरमै कसरी उपचार गर्ने भन्नेबारे केहि टिप्सहरु दिएको छौं । तपाईले यी टिप्सहरु मनन् गदै आफु र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नु होस् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमित भएपनि धेरैजसो व्यक्तिले हल्का रुपमा लिने गर्छन । त्यसैले को सग कोरोना छ भन्ने थाहा हुदैन । तपाई अरु सग सजग रहन्नु होस् । घरमा धेरै मानिसहरु जम्मा नगर्नु होस् ।
आफुलाई कोरोना भाईरसको आसङका लागेमा कोरोनाभाइरस जाँच उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् । जस्तै ज्वरो नाप्नु होस् । यदि तपाईंलाई ज्वरो वा नयाँ खोकीको कुनै लक्षण छ भने अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगर्नुहोस् ।
हाल कोरोनाको आधिकारिक औषधी बनिसकेको छैन् । त्यसैले अरुले भनेको लहलहिमा अरु कुनै पनि औषधि खाने चेष्टा नगनुहोस् ।
यदि तपाईलाई रोग बिग्रँदो छ वा तपाईको लक्षणहरु सात दिन पछि पनि सुधार भएन भने जति सक्दो चाँडो चिकित्सा सहायता लिनु पर्छ । यदि सामान्य छ भने फोनद्धारासल्लाह लिने, आपतकालिन भए अस्पताल गई हाल्नु पर्छ । सकेसम्म स्थानिय निकाय सगँ सम्पर्कमा रहिरहनु पर्छ ।
यदि तपाईंले ज्वरो वा लगातार खोकी अनुभव गर्नुभयो भने तपाईंले तुरुन्तै स्वयंलाई अलग गर्नुपर्दछ । तपाईं अस्वस्थ भएको बेलामा कुनै कडा गतिविधि त्याग्नु पर्छ । तर हल्का बिरामी अनुभव गरिरहेका व्यक्तिहरूले चिकित्सा सहयोग लिन आवश्यक पर्दैन।
घरमा प्रशस्त आराम गनुहोस्, गेडागुडि को झोल खानुहोस , धेरै तरल पदार्थहरू पिउनुहोस् । पर्याप्त पानी पिउनुहोस् यस्ले तपाईलाइ फुतिलो र रोग सग लड्न मद्त गर्छ ।
हामि ज्वरो र टाउको दुख्ने लक्षणहरूको लागि स्वऔषधी लिदा प्यारासिटामोल वा आइबुप्रोफेन लिन सक्छौ तर लक्षणहरू झन् खराब भए तुरुन्त चिकित्सक सल्लाह अनुसरण गर्नुपर्छ ।
चिसो र फ्लूको उपचार गर्नको लागि तपाईंले प्रयोग गर्न सक्ने केही औषधी र उपचारले कोरोनाभाइरस लक्षणहरूको साथ पनि मद्दत गर्दछ । खोकीको औषधि तपाईंको खोकीलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
यदि तपाईंसँग एन्टिबायोटिकहरू घरमा वरिपरि रहेको छ भने, तिनीहरूलाई कोरोनाभाइरसको उपचारको लागि प्रयोग नगर्नु होस् । किनकि यो भाइरस हो, एन्टिबायोटिकले कोरोनाभाइरस सुधार गर्दैन।
कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाई हुँदै
अखिल क्रान्तिकारीद्वारा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भएको घटनाको विरोध, दोषीलाई कारवाहीको माग
यी हुन् नपढाएरै सरकारी तलब खाने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष यादव, अखिल क्रान्तिकारीले गर्यो कारवाही
स्वास्थ्यकर्मी सोनियाको मृत्यु भएसँगै अमेरिकी कोरोना खोप ‘फाइजर’ बहिस्कार
कोरोना कहरः ९ महिनापछि खुल्ने भए विद्यालय र फिल्म हल